Kwete Mai Tai, hapana Vodka apo maAmerican F22 Raptor Fighter Jets akadzingirira Russian Air Force mamaira mazana matatu kubva kuHawaii
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose » Kwete Mai Tai, hapana Vodka apo maAmerican F22 Raptor Fighter Jets akadzingirira Russian Air Force mamaira mazana matatu kubva kuHawaii
Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Hurumende Nhau • Russia Kuputsa Nhau • chengetedzo • ushanyi • Tourism Kutaura • Zvakavanzika Zvokufamba • USA Kuputsa Nhau • Akasiyana Nhau
Raptor murwi jets akakwenya pamusoro pePacific
Matatu matatu eUS F-22 Raptor akaendeswa Svondo, Chikumi 13, 2021, pamusoro pePacific Ocean. Jets dzakatangwa kubva kuHawaii Hickam Air Force Base paOahu kutyisidzira maRussia Fighters kure neUS gungwa mutsara weHawaii.
Iyo US Airforce ine iyo F-22 Raptor murwi jeti. Ndeyechizvarwa chechishanu ndege iyo, kusvika parizvino, inoonekwa semurwi akanakisa kwazvo munyika.
Izvi zvakasiyana zvakaisa hwaro hwedzimwe ndege dzakafanana kuti dziteedzere, nemazhinji ekutanga kuchikwereti chayo:
Iyo F-22 ndiyo yaive yekutanga kuburitsa yakaderera radar kuoneka, super-cruise, super-maneuverability, uye epamberi sensor network. Iyo F-22 yaivewo padhuze-isingaenzanisirwe imbwa yekurwa, kunyangwe yaishaya mikana yakawanda-yekugona kwemajeti ekupedzisira ehondo.
Kekupedzisira jeti iyi paaiita yaive muHawaii munaJune 13 gore rino achipindura pakudenhwa neRussia mamaira mazana matatu kubva kuWaikiki Beach.
Iyo F-22 Raptor ndiyo ndege nyowani yemauto eMweya. Kusanganiswa kwayo kwekubira, supercruise, maneuverability, uye yakasanganiswa avionics, pamwe nekuvandudzwa kwekutsigirwa, inomiririra mukana wekuratidzira mukugona kwehondo.
Iye Raptor anoita ese emhepo-kumhepo uye emhepo-kune-pasi mamishini. Kufambira mberi kwakakosha mukugadzirwa kwejongwe uye sensor fusion kunatsiridza mamiriro emutyairi. Mumhepo-kumhepo kumisikidza, iyo Raptor inotakura matanhatu AIM-120 AMRAAM uye maviri AIM-9 Sidewinders.
Iyo F-22 inounza hunyengeri muzuva, ichigonesa kwete chete kuzvidzivirira pachayo asi nezvimwe zvinhu. Injini dzeF-22 dzinoburitsa zvakanyanya kupfuura chero yazvino injini yekurwa.
Iko kusanganiswa kweyeyeyeyeya aerodynamic dhizaini uye nekuwedzera kusundira kunotendera iyo F-22 kuenda kune supersonic airspeeds (yakakura kupfuura 1.5 Mach) isina kushandisa afterburner - hunhu hunozivikanwa se supercruise.
Ndege yakatumidzwa yaive F / A-22 kwenguva pfupi isati yapihwa zita rekuti F-22A muna Zvita 2005.
Vakuru vemauto eUS vakasimbisa kuti veF-22 vakakwenya Svondo, Chikumi 13 vachipindura mabhomba eRussia achifamba padyo nenzvimbo yemhepo yeAmerica. Kunyangwe ndege dzehondo dzeRussia dzisina kunyatsopinda muUnited States Air Space muHawaii. MaJets eU.S. akazodzoka kuzasi.
Pakutanga, zvainzi kupindurwa kwemauto kwaive kuchikumbiro cheFederal Aviation Administration (FAA) kuti iitise "zvisina kufanira zvemhepo."
Musi waChikumi 13, 2 Raptors dzakatangwa neIndo-Pacific Command paCamp HM Smith kumutemo wayo wepasi, Pacific Air Forces, 154th Fighter Wing, kubva kuHickam pachitsuwa cheOahu nenguva dza4: 00 masikati ikateverwa neyechitatu Raptor nezve awa rimwe gare gare. Zvinotaridza kuti KC-135 Stratotanker - ndege yekuisira mafuta - yakashandiswawo mumishinari, ichinongedzera kuchokwadi chekuti ndege ingangoda rubatsiro rwekuwedzera mafuta.
Nyaya iyi, iyo isina agency, nendege, kana mumiriri wemauto akatsanangura zvakadzama, yakagadziriswa uye vatatu Raptors neKC-3 Stratotanker vakadzokera kuHickam Airforce base kuChitsuwa cheOahu.
Paakabvunzwa, mutauriri weFAA Ian Gregor akangoti, "Tine hukama hwepedyo hwekushanda nemauto." Mauto Emuchadenga ane F-22s, vatyairi vendege, vanochengetedza, uye vashandi vezvombo vanoshevedza maawa makumi maviri nemana pazuva kuHickam kuti vapindure nekutyisidzira kwemhepo kuzvitsuwa zveHawaii sechikamu cheyambiro yekuchengetedza mhepo.
Chokwadi chakazoburitswa mazuva gare gare apo zvakavanzika mainjini ekutsvagisa akabvisa mibvunzo kuzvinyorwa zvakafukidza chiitiko ichi.
Izvo zvakanyatsoitika ndezvekuti Russia yakanga yaitisa chiuto chikuru kwazvo muPacific Ocean kubva Hondo Yenyika II - pamwe kuvhura pasi kumusangano weBiden-Putin kuGeneva. Chiitwa ichi chakaitwa chete mazana matatu kusvika mazana mashanu emakiromita kubva kumahombekombe ane zuva eHawaii.
Vhiki rapfuura Russia yakarova MiG-31 ndege yehondo kuti iperekedze ndege yemauto eU.S. pamusoro peBarents, RIA agency yenhau yakashuma ichitaura chirevo cheRussia navy.
Mauto eRussia akataura kuti ndege yeUS yakaonekwa seP-8A Poseidon ndege uye ndege yehondo yeRussia yakadzoserwa kunzvimbo yayo nekukurumidza apo ndege yeUS yaita U-kutendeuka ichibva pamuganhu weRussia, sekureva kweRIA.
Gungwa reBarents igungwa rekumahombekombe kweArctic Ocean, iri kumahombekombe ekuchamhembe kweNorway neRussia uye rakakamurwa pakati penharaunda yeNorway neRussia,
Kudzoka muna 2017, iyo FAA yakakumbira ndege yekutsigira kubva kuHickam panguva iyo 2 F-22s dzakatumirwa kumusoro kunoperekedza American Airlines ndege ichibva kuCalifornia nekuda kwemunhu aiedza kumanikidza nzira yake kumberi kwendege. FBI yakatora mutakurwi muchitokisi paakamhara.
Iyo 154th Wing chikamu cheHawaii Air National Guard asi inoshanda zvinoshanda neveMhepo YeMhepo uye inopa mazhinji ezvitsuwa kuchengetedzeka. Iyo ine F-22 vatyairi parunhare maawa makumi maviri nemana pazuva kuHickam yekukurumidza kupindura kune zvingangotyisidzira kuzvitsuwa zveHawaii.
Mazhinji emauto emauto ekuvhiya ndege kudunhu rePacific munguva pfupi yapfuura akawedzera kudzidziswa kwavo uye nekuita tempo. Mauto Emuchadenga nguva pfupi yadarika akatanga kutambanudza ndege dzayo kutenderedza Pacific pamwe nendege dzinoenda nendege kumahombekombe ezvitsuwa zviri kure.
Tanzania Tour Operators Zvino Pakunetsana naMinister Over...
Yekutanga Indonesia K-Pop Awards Zvino Live Kutenderera
Saudia Airlines Kuronga Kuwedzera Kutsva kweCaribbean ne...
Air Canada inoburitsa chirongwa chekudzoka kwakachengeteka kwe ...
Gurukota rezvekushanyirwa kwenyika reJamaica rinosuwa zvikuru neTrelawny...
Mutemo mutsva weEU ucharambidza vashanyi vasina kubayiwa kubva ...